Xaaladaha isbadalka sarifka Lacagaha ee Puntland oo laga shiray
By Baarlamaanka Puntland + GO
GAROWE, Puntland - Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka Golaha Wakiillada Dawladda Puntland ayaa kulan xog-werysi ah la yeeshay Wasaaradda Maaliyadda & Bangiga dhexe ee Dawladda.
Kulanka yaa ujeedadiisu ahayd xaaladaha isbadalka sarifka Lacagaha taas oo ay cabashooyin kasoo gudbiyeen qaybo kamid ah shacabka Puntland.
Wasaarada Maaliyadda iyo Bangiga dhexe ee Dawladda ayaa Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka warbixin kasiiyey xaalada isbadal ee sarifka lacagaha iyo waxa uga qorsheysan waxka-qabashada isbadalkaas.
Dhinaca kale Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka waxaa uu Talo iyo tusaalaba ku biiriyey sida ugu haboon ee wax looga qaban karo Isbadelka Sarifka lacagaha, iyadda oo dhawaan la filayo in Golaha xukuumaddu go’aan ka qaadato arrimahaas.
Dhanka kale, Guddiga Arrimaha Gudaha, Dawladdaha Hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Golaha Wakiillada DPL ayaa kulan xarunta Golaha Wakiillada kula qaatay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyadda DPL Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyadda DPL ayaa ka warbixiyey shaqooyinka Wasaaradda, qorshayaasha degsan, waxyaabaha u qaab-soomay June illa September 2020 iyo weliba caqabadaha jira, isaga oo sidoo kalena, su'aalo laga weydiiyay arrimaha uu ka hadlay, isla markaana ay Guddigu u hawlgalidoonaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira Wasaaradda ayna doorkooda ka qaadanayaan.
Kulanka Guddiga Arrimaha Gudaha, Dawladaha Hoose iyo hor-marinta reer miyiga ee Golaha Wakiillada DPL ay la qaateen Wasiirka Wasaaradda ayaa qeyb ka ah shaqooyinka Golaha Wakiillada DPL ee la socoshada Hay'adaha fulinta dalka.
Geesta kale, Guddiga Golaha Wakiillada Dawladda Puntland u xil-saareen inay ka soo talo-bixiyaan soona lafa guraan cabashooyinkii ay Golaha Wakiillada u soo gudbiyeen Hay’adda Horumarinta Waddooyinka iyo Hay’adda Qandaraasyada iyo Iibka DPL fadhigii 3aad ee Guddiga joogtada ayaa maanta kulan la qaatay Hay’adahaas.
Baarlamaanka Puntland + GO
Soomaliya 22.09.2020. 11:30
Cawad ayaa ugu baaqey Deni inuu kala hadlo Qoor Qoor si aan loogu carqaladeynin dib usoo doorashadiisa kursifa uu ku fadhiyo.
Puntland oo dedejineysa xukun ku ridida dadka kufsiga geysta
War Saxaafaded 13.04.2019. 15:30
Puntland oo si heer sare ah u sagootisay goleyaasha xeer-dejinta
Puntland 11.04.2019. 05:32
Midowga Yurub oo xoojinaya xiriirka ciidamada badda Puntland
Puntland 28.03.2019. 14:53
Deni: Waa in la horumariyaa Tacliinta si loo yareeyo xagjirnimada
Puntland 21.03.2019. 06:26
Maxay Puntland uga duwan tahay maamulada kale ee Soomaaliya?
Puntland 24.08.2020. 13:05